“Xukuumaddu dhagaha ayay ka furaysatay tacaddiyada siyaasadeed” Guddoomiyaha Xisbiga Waddani. | Hargeysa World~Herald
“Xukuumaddu dhagaha ayay ka furaysatay tacaddiyada siyaasadeed” Guddoomiyaha Xisbiga Waddani.
Uncategorized“Xukuumaddu dhagaha ayay ka furaysatay tacaddiyada siyaasadeed” Guddoomiyaha Xisbiga Waddani.
maalinta xuuqul aadamaha ayaa laga xusay magaalada Hargeysa. waxaa lagu soo marti qaaday siyaasiyiin, xukuumadda iyo ururada rayidka ah. madashan waxaa ka soo baxa inta badan warbixin sanadle ah oo lagaga hadlaayo xuquqda aadamaha gaara ahaan, soomaliland.
guddoomiyaha xisbiga Waddani Xirsi Xaaji Cali Hasan ayaa goobta hadal ka jeediyey waxaanu bogaadiyey guddoomiyaha Haayadda Xuquuqul insaanka Somaliland